Ngwa ise kachasị mma iji mụta physics maka gam akporo | Androidsis
Ngwa ise kachasị mma iji mụta physics maka gam akporo
Physics bụ otu sayensị kachasị mkpa iji ghọta ụwa, eluigwe na ụwa na ihe niile na-eme na mbara igwe. Na mgbakwunye, ọ bụ otu n'ime isiokwu ndị a na-ahụkarị na ụlọ akwụkwọ sekọndrị na, dabere na ọrụ, na kọleji na agụmakwụkwọ ka elu. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịnwe ngwaọrụ na -enyere aka ime ya na ịghọta ya nke ọma, dị ka ngwa ndị a anyị depụtara ugbu a.
Ọzọ, anyị na -anakọta Ngwa 5 kacha mma iji jiri ekwentị gam akporo gị mụta physics. Ha na-ejekwa ozi na-enye ume ọhụrụ ihe ọmụma na ịghọta sayensị a. N'aka nke ha, ha bụ ezigbo nkwado mgbe ha na -edozi nsogbu dị mfe ma dị mgbagwoju anya. Ha niile dị na ụlọ ahịa Google Play yana, kedu ka ọ ga -esi bụrụ nke ọzọ, so na ndị kacha ewu ewu, ebudatara na ọkwa kachasị elu na ụlọ ahịa.
N'okpuru ị ga -ahụ usoro nke ngwa kachasị mma iji mụta physics maka ekwentị gam akporo. Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama, dị ka anyị na-eme mgbe niile, na ndị niile ị ga-ahụ na mkpokọta akwụkwọ a bụ n'efu. Ya mere, ị gaghị akpa ụdị ego ọ bụla iji nweta otu ma ọ bụ ha niile.
1 Nkà mmụta Fiziks - Basic physics
2 Fisiks nke nkiti - nchịkọta, usoro na eserese
4 Ụdị physics efu
5 Mmetụta nke kemistri na physics
Nkà mmụta Fiziks - Basic physics
Master Physics bụ ngwa dị mma maka ịmụ physics. N'elu nke ahụ, ọ na-abịa na ọtụtụ ọrụ na atụmatụ ndị na-enyere aka dozie ma nsogbu ndị bụ isi na mgbagwoju anya, ma ọ bụ maka ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma ọ bụ kọleji. Ọ na -arụkwa ọrụ ka ọ na -eme ma melite ihe ọmụma mbụ banyere mmalite na physics dị elu.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakọ ọsọ, osooso na data ndị ọzọ nke ahụ ma ọ bụ urughuru, ma ọ bụ ịmara ozi gbasara oghere na oge ma ọ bụ ihe ndị ọzọ, ọrụ mgbako nke ngwa a bara ezigbo uru, ebe ọ na -enye gị ohere ịbanye data dị mkpa maka nke a. Ọ na-egosikwa usoro na ngwọta iji mechaa na dozie mmemme gị.
Ọ na-abịa n'ọtụtụ isiokwu iji mụọ nke ọma na tiori akọwara nke ọma yana nchịkọta, na ụfọdụ n'ime ha bụ ihe ndị a: Ọnụ ọgụgụ ewepụtara, nha nke mbụ, nha Vector, nha Scalar, nha na njehie, njehie usoro, njehie enweghị atụ, Okwu mmalite nke kinematics, Nkezi na ọsọ ọsọ, Nkezi na ngwangwa ngwa ngwa, uwe kwụ otu ebe nke igwe kwụ otu ebe, Mgbapụ agbakwunyere n'otu n'otu, mmegharị okirikiri dị iche iche, ọgba tum tum Harmonic, okwu mmalite nke ụkpụrụ mgbanwe, ụkpụrụ mbụ nke ike, ụkpụrụ nke abụọ nke ike na ụkpụrụ atọ nke ike, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Ngwa nwere ajụjụ dị iche iche na physics, yana usoro physics na nkuzi iji mụta nke ọma.
Developer: Carlo Terracciano - MasterApps
Fisiks nke nkiti - nchịkọta, usoro na eserese
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụta physics isiokwu dị ka makanik, thermophysics, optics, ebili mmiri, electromagnetism na mmiri mmiri, Ngwá ọrụ a bụ otu n'ime ihe kachasị mma na nke zuru oke nke nwere ike ịchọta taa na Ụlọ Ahịa Play, ebe ọ na-abịa na ihe ndị bara uru na usoro ihe ọmụma akọwapụtara nke ọma dị mfe nghọta. Na mgbakwunye, ọ nweghị atụ ọrụ iji mee ka isiokwu dị mfe.
O nwekwara ihe atụ na nkọwa zuru oke nke na -enyere aka ịghọta physics nke ọma maka onye ọ bụla chọrọ ịmụ gbasara sayensị a wee melite akara ule ya na nsonaazụ ya na kọleji, ụlọ akwụkwọ, mahadum ma ọ bụ teknụzụ.
Basic Physics anaghị eme na -enweghị usoro ihe mgbako na onye ntụgharị iheNgwa abụọ bara ezigbo uru mgbe ị na -eme mgbatị ahụ ma na -amụ ihe. Na mgbakwunye, ọ dị nfe: interface ya bara uru nke ukwuu, yabụ ị nwere ike nweta isiokwu ọ bụla site na ogwe aka ekpe ya wee nwee ihe ọmụma niile ịchọrọ iji ghọta physics nke ọma ma melite akara ule gị.
Basic Physics - Nchịkọta, Ụdị na Ọgụgụ
N'ịga n'ihu ikwu maka ngwa ọzọ kachasị mma iji mụta physics maka gam akporo, anyị na -eche ihu ihu Formulia, ngwa dị mfe iji nke, dị ka aha ya pụtara, na -abịa na ọtụtụ usoro physics maka ịme mmega ahụ na idozi nsogbu ndị bụ isi na ndị dị elu.
Site na nnukwu nchekwa data nke usoro mgbakọ na mwepụ na physics, Formulia na-atụpụta atụmatụ dị ka otu n'ime ngwa na-emeju ọmụmụ ihe onye ọ bụla na-ewere ihe ọmụmụ sayensị. Ma ọ bụghị naanị na -abịa usoro physics na mgbakọ na mwepụ, kamakwa na usoro kemịkalụ na ọbụna okpokoro oge dị ike.
N'aka nke ya, site na Formulia ị nwere ngwaọrụ aka gị maka ntụgharị nke otu, akara mgbakọ na mwepụ, njigide anụ ahụ zuru ụwa ọnụ, ihe mgbako sayensị, mgbako matriks na tebụl nwere akụrụngwa nke ihe injinịa na ụkpụrụ. Ọ na -abịa na akwụkwọ ọkọwa okwu nke echiche anụ ahụ bụ isi, iwu na ụkpụrụ nke physics, ịdị ukwuu anụ ahụ, yana ihe niile ịchọrọ ịmụta physics n'ụzọ dị mfe, ngwa ngwa na n'ụzọ dị mfe, na -enweghị ọtụtụ ntụgharị na ntụgharị.
Developer: Mario Chavarria
Ụdị physics efu
Formula Física Free bụ ngwa yiri Formulia, ebe ọ na-elekwasị anya n'inye onyinye ọtụtụ usoro physics maka idozi ọrụ, nsogbu, mmega ahụ na mmemme. Ngwa a maka mmụta physics nwere usoro nke isi na nke dị elu, maka ọrụ ma ọ bụ ọmụmụ ihe, isiokwu ndị ha na-akpakọrịta bụ nke kachasị ewu ewu, gụnyere ụdị ndị a: Mechanics, Electricity, Thermal Physics, Peridic Movement, Optics, Atomic Physics and Constant .
Ọ na-abịa na mgbako bara uru nke na-enye ohere ntinye data dị iche iche na nsogbu maka mkpebi ha, yana folda ọkacha mmasị nke enwere ike ịchekwa usoro nke eji eme ihe. Ụdị usoro ahụ dị n'ọtụtụ asụsụ ma na -enye gị ohere isoro ndị enyi gị kerịta usoro ahụ ngwa ngwa.
Developer: Ụlọ ọrụ NSC CO.
Mmetụta nke kemistri na physics
Iji mechaa akwụkwọ nchịkọta a nke ngwa kachasị mma iji mụta physics maka gam akporo, anyị nwere ịme anwansị na physics, ngwa nke nwere ihe gbasara physics dị iche iche na iche iche ndị na-emekọrịta ihe ma na-eje ozi ime ka ume na melite ihe ọmụma gara aga banyere isiokwu a, yana ịmụta site na ọkọ, n'ihi na ọ na-abịa na echiche na atụ dị mfe nghọta. Ọ nwekwara ihe na onwu.
Developer: Kiwix Otu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa ise kachasị mma iji mụta physics maka gam akporo
Egwuregwu egwuregwu 5 kacha mma maka gam akporo
Ngwa usoro ọnwa kacha elu maka gam akporo